Ukuncokola Ngaphandle Kwesandla
Ukuncokola Ngaphandle Kwesandla I-DIXIX Isithethi se-USB kunye neMic yenzelwe ukuba isebenze. Isithethi esibonakalayo silungele incoko engenazandla kwi-intanethi, imakrofoni ilungile phambi kwakho ukuba idlulise ngokucacileyo ilizwi kumamkeli kwaye isithethi siyakudlula kwilizwi elivela kulomntu unxibelelana naye.
Itafile, Ukuxabana, Iplinth
Itafile, Ukuxabana, Iplinth Imilo yeTrifold yaziswa ngokudibana kobuso obunxantathu kunye nokulandelelana okungafaniyo. Inobuninzi obuyinkimbinkimbi kodwa eyinkimbinkimbi kunye noyilo oluqingqiweyo, ukusuka kumacala onke okujonga ityhila ubume obahlukileyo. Uyilo lunokulinganiselwa ukuba luhambelane neenjongo ezahlukeneyo ngaphandle kokujongela phantsi ukuthembeka kwalo. I-Trifold yimboniso yeendlela zokwenza izinto zedijithali kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji entsha yokwenza njengerobhothi. Inkqubo yokuvelisa iphuhliswe ngokubambisana nenkampani ye-robotic yokwenza izinto ngentsimbi kunye neerobhothi ezi-6.
Into Yokudlala Ukwahlula iithoyi zezilwanyana zihamba ngeendlela ezahlukeneyo, zilula kodwa ziyonwabisa. Iimilo zezilwanyana ezingaqondakaliyo zithatha abantwana ukuba bazicingele. Kukho izilwanyana ezi-5 kwiqela: Ihagu, Idada, indlulamthi, umnatha kunye nedinosaur. Ukuhamba kwentloko ka-Duck ukusuka ekunene ukuya ekhohlo xa uyikhetha kwidesika, kubonakala ngathi kuthiwe "HAYI" kuwe; Intloko yendlulamthi inokuhamba usuka phezulu uye ezantsi; Impumlo yengulube, iintloko zooMnxibelelanisi neDinosaur zisuka ngaphakathi ziye ngaphandle xa ujika imisila yazo. Zonke iintshukumo zenza abantu bancume kwaye baqhube abantwana ukuba badlale ngeendlela ezahlukeneyo, njengokutsala, ukutyhala, ukujika njl njl.
Iroly Poly, Iithoyi Zamaplanga Ezinokususwa
Iroly Poly, Iithoyi Zamaplanga Ezinokususwa Njani ukuba nomnyama? Ungawola njani umoya wehlobo? Ndihlala ndichukunyiswa zizinto ezithile ezifihlakeleyo kwaye ndiziva ndonelisekile kwaye ndonwabile. Uyigcina njani kwaye yeyiphi? Kwanele kulungile njengomthendeleko. Ndingathanda ukwenza iintlobo ezahlukeneyo zeemathiriyeli ngendlela elula nehlekisayo. Bayeke abantwana badlale kunye nabo ukuze babone izinto ezibonakalayo, bavuselele iingcinga zabo kwaye babancede baqonde imeko engqongileyo.
Amabala, Izitulo Ezixhokonxa
Amabala, Izitulo Ezixhokonxa U-Lisse Van Cauwenberge wenze le yesisombululo esinezinto ezininzi ezisebenza njengesihlalo esixhokonxa ikratshi xa izitulo ezimbini zeDimdim zidibeneyo. Isitulo ngasinye esinyikayo senziwe ngeenkuni zineensimbi ezixhasayo kwaye zigqitywe kwi-walnut veneer. Izitulo ezibini zinokuxhonywa omnye komnye ngoncedo lweeplasitiki ezifihlakeleyo ngaphantsi kwesihlalo ukwenza ibhulukhwe yomntwana.
Teapot Kunye Teacups
Teapot Kunye Teacups Le teapot enesidima ngokuhenda eneekomityi zokuthelekisa inokhuselo olungenakuthengiswa kwaye luyolo ukuthabatha kuyo. Ubume obungaqhelekanga beli potya yeti kunye nokudityaniswa komzimba kunye nokukhula komzimba buboleka ngokukodwa kukuthulula okuhle. Iikomityi ziyenzeka kwaye ziluqilima ukuze zizinekele ezandleni zakho ngeendlela ezahlukeneyo, kuba umntu ngamnye unendlela yakhe yokubamba ikomityi. Ifumaneka ngemisonto emhlophe ecwebezelayo ngesilivere epeyintiweyo okanye i-matte porcelain emnyama enesiciko esimhlophe esimdaka kunye neendebe ezimhlophe ezimhlophe. Isihluzo sensimbi engenazintsimbi senziwe ngaphakathi. IZIXHOBO: I-teapot: 12,5 x 19.5 x 13.5 iikomityi: 9 x 12 x 7.5 cm.
Catzz Ikati Ibhedi Saturday 16 October
Perception Ikhefi Friday 15 October
Poise Isibane Setafile Esinokuhlengahlengiswa Thursday 14 October
Ukuncokola Ngaphandle Kwesandla Itafile, Ukuxabana, Iplinth Into Yokudlala Iroly Poly, Iithoyi Zamaplanga Ezinokususwa Amabala, Izitulo Ezixhokonxa Teapot Kunye Teacups